Otu esi ehichaa Xbox One console n'emebighị ya - VidaBytes | LifeBytes
Netwọk dị na netwọkụ | | Technology
Otu akụkụ dị mkpa nke inwe Xbox bụ idebe ya ọcha na ịrụ ọrụ, ọkachasị ka ọ ghara imebi ime ụlọ site na nrụpụta uzuzu. N'ebe a, anyị ga -akụziri gị otu esi ehicha Xbox One:
Iji hichaa mpụga nke Xbox One, jiri akwa microfiber wepu mkpịsị aka, unyi, ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ. Nke a kwesịkwara iwepụ nnukwu uzuzu nke na -agbakọkarị na ngwa elektrọnik, ọkachasị ndị echekwara na kabinet ma ọ bụ n'okpuru ihe ngosi telivishọn.
Na mgbakwunye na ọdịdị ahụ, ị ​​nwere ike chọpụta na onye na -akwado console na -eme mkpọtụ ka ọtụtụ awa gachara. Maka ụfọdụ, ọrụ mkpọtụ a na -ebute egwuregwu dị nwayọ ma ọ bụ okwu ndị ọzọ.
Iji mezie nke a, jiri kandụl nke ikuku na -agbachapụ wepụ ájá. Hụ na ị ga -agbanyụ ngwa gị tupu ịmalite nhicha ọ bụla iji zere mmebi ma ọ bụ mmerụ ahụ ọzọ.
Microsoft anaghị akwado ka ị nwaa imeghe igwe njikwa egwuregwu ma na -agba gị ume ịchọ enyemaka ọkachamara maka nrụzi n'ime ọ bụla. N'adịghị ka Xbox 360, Xbox One enweghị ihu ihu na -ewepu. Microsoft na -adọkwa aka na ntị megide iji ụdị nchacha mmiri ọ bụla, n'ihi na iji ya eme ihe nke ọma nwere ike ibute mmebi mmiri na sistemụ ikuku.
Ndụmọdụ maka otu esi ehicha Xbox One
Nke a bụ otu esi ehicha Xbox One gị, yana ihe ndị ị ga -eji mee ya.
Kwupu Xbox One gị.
Malite site n'iji akwa microfiber hichaa mpụta niile. Ndị a na -abụkarị otu akwa oghere nke a na -eji enyo. A na -akpọ nsụgharị ndị ọzọ maka nhicha.
Jiri akwa ahụ were were hichaa mpụga nke njikwa gị, gụnyere elu, ala, n'ihu, azụ, na akụkụ nke ngwaọrụ ahụ. Nhicha nke ọma ga -egbochi oke uzuzu ịkpakọba, nke nwere ike ịchọ ọtụtụ akwa iji hichaa ngwaọrụ gị nke ọma. Jiri mmegharị okirikiri ete mkpịsị aka ma ọ bụ smudges n'akụkụ plastik nke ngwaọrụ gị, gụnyere ihu na elu.
Mgbe ihichachara mpụga nke Xbox One gị, jiri kandụl ikuku were kpachapụ anya kpochapụ uzuzu ọ bụla na-aba n'ime ọdụ ụgbọ mmiri. Enwere ike ịzụta ite ndị a n'ụdị dị ọnụ ala ma ọ bụ karịa.
N'agbanyeghị ụdị ị na -ejiJiri mkpirisi mkpirisi iji wepu nrụpụta n'ọdụ ụgbọ mmiri azụ na oghere nke njikwa gị. Hụ na ị kwụpụrụ ngwaọrụ tupu i hichaa ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị n'azụ.
Jiri akwa gafee mpụta ọzọ iwepu uzuzu nke dakwasịrị na ngwaọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Otu esi ehicha Xbox One console gị n'emebighị ya
PS4 nke abụọ kacha ere ere oge niile
Kedu ihe Smart TV na -eme